विवाहपछि छोरा ससुरालितिरै, ७८ वर्षको उमेरमा पात बेच्दै आमा ! [सहयोग गर्नेको लहर उर्लियो ] – Daily NpNews
आजको दिन एउटा संघर्षशील आमाको जन्म भएको थियो। जस्ले एउटा देवी स्वरुप छोरीलाई जन्म दिइन्।
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विवाहपछि छोरा ससुरालितिरै, ७८ वर्षको उमेरमा पात बेच्दै आमा ! [सहयोग गर्नेको लहर उर्लियो ]
काठमाडौं । ‘बाह्र छोरा तेह्र नाति, बुढाको धोक्रो काँधै माथि’ भन्ने नेपाली उखान निकै प्रचलित छ । यो उखान तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटार बस्ने ७८ वर्षीया नन्दकुमारी दवाडीलाई पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेकपाका सांसदहरुले दशैं भत्ता कोरोना कोषलाई दिने